Send to နောက်မှာ ဘာမှမပေါ်တော.လို.... — MYSTERY ZILLION
Send to နောက်မှာ ဘာမှမပေါ်တော.လို....
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ.စေတနာတွေကြောင်..အခုလို.မေး၇တာပါ.....သူငယ်ချင်းကပြောလို. စက်လေးနေရင်..c အောက်မှာသိမ်းထားတဲ..Installer file တွေကိုD:/အောက်ကို ရွေ့ရင်မလေးတော.ဘူး ဆိုပြီး...ရွေ့လိုက်တာ ..စက်ကတော.ရွေ့လိုက်တိုင်း permission တောင်းပါတယ်.ဒါပေမဲ. skip တွေလုပ်လိုက်တာ,,နောက်ဆုံးတော....တစ်ခုခုကို right click ထောက်လိုက်ြပီး send to ဆို၇င်ြပတာက တစ်ခုပဲ ရှိတော.တ,ယ်...ကလိလွန်သွားလိုလေ...သိတဲ.သူငယ်ချင်းတွေမေးတော......သူတိုတွေတစ်ခါမှ အဲလိုမတွေဘူးတဲ..ဘာများဖြစ်ကုန်တာလဲ အတိဘူးးးးးသိ၇င်ဖြေပေးကြပါနော် ;;)
Thanked by6rsteelerscheap gllfridgerusse livollvict ofalolati lmonclerski illikintann
Download sendtodata.zip from http://goo.gl/wiWYG6
Extract sendtodata.zip to desktop and copy data.
Open Run box and type %appdata%\_Microsoft\_Windows\_SendTo
Paste data from desktop to SendTo folder.
thnk you..very much
Thanked by5rsteelerscheap gllfridgerusse livollvict ofalolati illikintann